के हामी आफ्नो यौन जीवनबाट सन्तुष्ट छौं ? - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
मङ्लबार, फाल्गुन २५, २०७७ Tuesday 9th March 2021
के हामी आफ्नो यौन जीवनबाट सन्तुष्ट छौं ?
प्रकाशित मिति : February 20, 2021
दाम्पत्य जीवनमा यौनको खास भूमिका रहन्छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच जति प्रगाढ र विश्वसनिय सम्बन्ध छ, उत्तिनै उनीहरुको यौन जीवन पनि आनन्दायक हुन्छ । तर, दम्पतीबीच गुनासो, अविश्वास, आशंका, असहयोगको स्थिति छ भने उनीहरुले यौन जीवनबाट भरपुर आनन्द लिन सक्दैनन् ।
यद्यपि कतिपय अवस्थामा हामीले चाहेर पनि आफ्नो यौन जीवनलाई आनन्ददायक बनाउन सक्दैनौं । यसमा हाम्रो मानसिक र शारीरिक दुबै समस्या हुनसक्छ । किनभने यौन एक शारीरिक क्रिया भएर पनि यसमा मानसिक उपस्थिती प्रमुख मानिन्छ । त्यसैले शारीरिक र मानसिक तालमेलबाट मात्र यौनमा भरपुर आनन्द लिन संभव हुन्छ ।
यौनका निम्ति हामी शारीरिक वा मानसिक रुपमा कति सक्षम छौं ?
–एक सामान्य व्यक्तिलाई यौनको आवश्यक्ता र चाहाना हुन्छ ।
– यस किसिमको चाहाना व्यक्ति अनुसार एकनास हुँदैन । कसैलाई कम हुन्छ, कसैलाई बढि ।
– फेन्टासी अर्थात कल्पना गर्नु, कुनै खास व्यक्तिप्रति हामी आकर्षित हुन्छौ भने, उसको बारेमा सोच्नु वा यौन सम्पर्कको इच्छा गर्नु स्वभाविक र सामान्य हो ।
– यौन इच्छा भएपछि मास्टरबेट अर्थात हस्तमैथुन गर्नु पनि स्वस्थ्य मानिन्छ ।
यदि माथि उल्लेखित तमाम लक्षण मिल्छ भने, हामी सेक्सुअली ठिक छौ भनेर बुझ्न सक्छौ । यदि यौन इच्छामा ह«ास हुनु भनेको सेक्सुअली फिटनेस कम हुनु हो ।
-हाम्रो यौन जीवन कति राम्रो छ ?
-के यौन सम्बन्धबाट आफु र पार्टनरले पहिले जस्तो सन्तुष्ट पाइरहेका छौं ?
-शारीरिक क्रिया भएपनि भावनात्मक रुपले आनन्द लिइरहेका छौ ?
यी तमाम प्रश्न आफु स्वंम र आफ्ना जीवनसाथीसँग गर्नुपर्छ, यसबाट थाहा हुन्छ कि हामी यौनका लागि कति सक्षम छौं भन्ने कुरा ।
यौन जीवन किनपनि सुमधुर र सक्रिय हनुपर्छ भने, यसले दम्पतीको स्वस्थ्यसँग सोझो सरोकार राख्छ । अध्ययनहरुमा भनिएको छ, विवाहित व्यक्ति कुमार व्यक्तिको तुलनामा बढी स्वस्थ र दीर्घायु हुने गर्छन् । यसले पनि यौनको महत्वलाई प्रष्ट पार्छ । यौन लाजको विषय भन्दा पनि प्राकृतिक र स्वभाविक प्रक्रिया हो । यद्यपी यसको सीमा र विधी छन् ।
सन्तुलित, सक्रिय र विधिगत् यौनक्रिया जीवनकै अहंम हिस्सा हो । यसले खासगरी दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न सहयोग गर्छ । तर, अहिलेको व्यस्त दिनचर्याले दम्पतीको यौन जीवन खलबलिदै गएको छ । दिनभर काम, करियर, पैसा, परिवारको दौडधूपले गर्दा दम्पतीको अन्तरंग सम्बन्ध खुकुलो बन्दै गएको छ । शारीरिक तथा मानसिक थकान, तनाव आदिले गर्दा यौन क्रिया प्रभावित भएको छ ।
नतिजा, दम्पती यौनमा उदासिन हुन सक्छन् । उनीहरुको यौनजीवन खल्लो हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा आफु र जीवनसाथी यौनका लागि कति सक्षम छौ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नैपर्ने हुन्छ ।
पार्टनरसँग भावनात्मक लगाव छ भने यौन जीवन राम्रो हुनसक्छ । यद्यपी दुबैजना यान्त्रिक जीवनशैली विताइरहेका छन् भने यौनको चाहानामा कमी आउन सक्छ । अर्थात सेक्सुअली फिटनेस कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जरुरी छ कि, दुबै एकसाथ समय विताउनुपर्छ । प्रेमपूर्वक कुराकानी गरौ । एकअर्काको सहयोग गरौ । जसको सिधा असर आफ्नो यौन जीवनमा परोस् ।
मानसिक तनाव, कामको बोझ, घरेलु जिम्मेवारीले यौनमा उदासिनता ल्याउँछ । संभव भएसम्म यस्तो तनाव सयन कक्षासम्म लान हुँदैन । दम्पतीले आपसमा मिलेर समस्याको समाधान खोजौ । त्यसैले आफ्नो सम्बन्ध र यौन जीवनमा दैनिक कामको असर पर्न दिनुहुँदैन ।
यौन सक्षमता धेरै हदसम्म आपनो शारीरिक तन्दुरुस्तीसँग पनि जोडिएको हुन्छ । तर, यदि कुनै सेक्सुअल वा शारीरिक समस्या छ भने परामर्शदाताको सल्लाह लिनैपर्छ । योग वा व्यायामलाई आफ्नो जीवनशैलीको हिस्सा बनाउनुपर्छ ।
के हो वीर्य र यो कसरी बन्छ ?
यी १२ कारण, जसले यौन जीवनमा असर पुर्याउँछ
जीवनशैलीयौन जीवनयौन सम्बन्धयौनका कुरा
तनहुँ देवघाटका महिला श्रीमान् बोकेर दौडिए
गोरखाको बुंकोटमा विविध कार्यक्रम गरि मनाइयो नारी दिवस
धादिङको रेडियो बिहानीका सञ्चारकर्मी श्रेष्ठले गरे आत्महत्या
नारी दिवसको अवसरमा गोरखा नगरपालीका स्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता
बस र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
बार्सिलोनाको नयाँ अध्यक्षमा लोपार्टा
स्मार्टफोनको बढ्दो लतले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको खतरा
गोरखाकी एक युवतीलाई बलात्कार गरी फरार रहेका आरोपी कालिकोटबाट पक्राउ